Indlela yokufundisa abantwana ngokwebhayibhile Discover Discover Discover online ▷ ➡️
Ungabafundisa njani abantwana ngokwebhayibhile. Los abazali banoxanduva ngqo kwimfundo yabantwana babo. Ke ngoko, kufuneka babafundise indlela yeNkosi, ngothando olungenamiqathango, imvakalelo yoxanduva kunye nobulumko.
Un imeko-bume esempilweni kwaye elungeleleneyo yosapho Kukwabalulekile ukunceda ukukhula kwabantwana kwintlalo yabo, ngokwasemzimbeni, ngokweemvakalelo, ngokwasengqondweni nangokomoya, kuwo onke amabakala kunye namanqanaba obomi.
1 Ungabafundisa njani abantwana ngokwenyathelo ngenyathelo leBhayibhile
1.1 1. Fundisa ukuthanda uThixo nommelwane
1.2 2. Fundisa ngomzekelo
1.3 4. Fundisa ukuthobela
1.4 4. Fundisa ngeziphumo zezigqibo ezingalunganga
1.5 5. Ufundisa iimfundiso ezisisiseko nemigaqo yobuKristu
1.6 6. Fundisa ngobukho bakho
2 Ungabafundisa njani abantwana ngokwenyathelo ngenyathelo leBhayibhile ngokwamanqanaba
2.1 Zifundisa njani iintsana ngokwebhayibhile
2.2 Ungabafundisa njani abantwana ngokwebhayibhile
2.3 Ulufundisa njani ulutsha ngokwebhayibhile
2.4 Ufundisa njani ulutsha kunye nabantu abadala ngokwebhayibhile
Ungabafundisa njani abantwana ngokwenyathelo ngenyathelo leBhayibhile
1. Fundisa ukuthanda uThixo nommelwane
Fundisa ukuthanda uThixo, ukumamela nokuthobela iLizwi lakhe Iya kuba yeyona mfundo ifanelekileyo onokuyishiyela abantwana bakho. UYesu ukwasikhokela kule miyalelo mikhulu: Mthande uThixo ngaphezu kwazo zonke izinto, nommelwane wakho njengawe siqu.
Uze uyithande ke iNkosi uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela, na ngomphefumlo wakho uphela, nangengqondo yakho iphela, nangamandla akho ephela. Lo ngowona myalelo uphambili.
Owesibini ke ufana nawo: Uze umthande ummelwane wakho ngoko uzithanda ngako. Awukho omnye umthetho inkulu kune ezi.
UMarko 12: 30-31
2. Fundisa ngomzekelo
Yiba ngumzekelo omhle kubantwanaAyingomsebenzi olula, kodwa unjalo ezisisiseko ukuze babe nezalathiso ibalulekile ebomini bakho. Njengompostile uPawulos, kufuneka sixelise uKristu ukuze abantwana bamxelise ngathi.
Yibani ngabaxelisa mna, njengokuba nam ndixelisa uKristu.
Eyoku-1 kwabaseKorinte 11: 1
4. Fundisa ukuthobela
La intobeko yinto esisiseko kwimfundo yakhe nawuphi na umntwana. Ukuba awukwazi ukufaka intobelo, ngekhe ubenako ukumnyanzela ukuhlonipha abanye, ke kuya kufuneka umfundise ukuthobela:
Nina bantwana, baveni abazali benu ngokwabaseNkosini; kuba oko kububulungisa.
Beka uyihlo nonyoko; wona lowo ngumthetho wokuqala onesithembiso;
ukuze kulunge kuwe, ube nexesha elide emhlabeni. Efese 6: 1-3
Ngenxa yeNkosi zithobeni kuwo onke amaziko abantu, nokuba ngukumkani, nokuba ngongaphezulu;
nakubalawuli, njengabathunyiweyo nguye, ukohlwaya abenzi bobubi, nakudumisa abo benza okulungileyo.
Ngokuba oku kukuthanda kukaThixo, ukuba ngokwenza okulungileyo nithulise ukungazi kwabantu abaziziyatha, Eyoku-1 kaPetros 2: 13-15
Ukuhlonipha nokuthobeka phambi kwabo bonke abantu.
Hloniphani wonke umntu. Bathande abazalwana. Yoyika uThixo. Hlonipha ukumkani. Eyoku-1 kaPetros 2:17
4. Fundisa ngeziphumo zezigqibo ezingalunganga
Abantwana bakho, ebomini babo bonke, baya kwenza izigqibo ezingalunganga ezininzi kwaye ngokuqinisekileyo baya kuba nefuthe kubo nakwabanye. Ke ngoko, kuya kufuneka usifundise esi sifundo ngokusebenzisa i ukulunga, ukuchaneka kunye nemida.
Musa ukukudela, nyana wam, ukohlwaya kukaYehova;
Musa ukudinwa kukululeka;
UNdikhoyo uyathanda ukohlwaya,
Njengoyise kunyana amthandayo.
IMizekeliso 3: 11-12
5. Ufundisa iimfundiso ezisisiseko nemigaqo yobuKristu
Ihlabathi iswele imigaqo elungileyo, ngakumbi amaxabiso amaKrestu anje ngala: cisimilo, ubulungisa, ingqibelelo kunye nokusesikweni. Fundisa abantwana bakho ukuze ubomi kuluntu, indalo kunye nabantu baxhamle kwiziqhamo zazo ezilungileyo.
Unako yini na, bazalwana bam, umkhiwane ukuvelisa iinkozo zomnquma, uthi umdiliya uvelise amakhiwane? Ke akukho mthombo unokunika ityuwa namanzi amnandi.
Ngubani na olumkileyo, owaziyo kakuhle phakathi kwenu? Yibonakalise ngehambo elungileyo imisebenzi yakho enobulali.
UYakobi 3: 12-13
6. Fundisa ngobukho bakho
Ubukho babazali kubalulekile kwimfundo yabantwana babo. Kubalulekile ukubakho ebomini babantwana bakho kuwo onke amabakala obomi babo.
Yalela umntwana ngendlela yakhe,
Naxa athe wamkhulu, akasayi kumka kuyo.
IMizekeliso 22: 6
Ungabafundisa njani abantwana ngokwenyathelo ngenyathelo leBhayibhile ngokwamanqanaba
Zifundisa njani iintsana ngokwebhayibhile
Kweli nqanaba lokuqala, ukukhula komntwana kwenzeka Unxibelelwano olunomdla, inkuthazo yeemvakalelo kunye nokunxibelelana nehlabathi langaphandle. Abazali kufuneka fundisa abantwana ngothando, silandela umzekelo kaBawo osezulwini kunye nathi. Yiba nenkathalo kwaye ubathande, unike ingqalelo kwiimfuno zabo zesondlo, intuthuzelo kunye nokukhuselwa.
Ngaba umfazi uya kuyilibala into awayeyizalele, ayeke ukuba nosizi ngomntwana wesibeleko sakhe? Nokuba uthe walibala, andinakuze ndikulibale.
UIsaya 49: 15
Ungabafundisa njani abantwana ngokwebhayibhile
Abantwana abancinci bafuna ingqwalaselo enkulu kunye nenkuthazo elungileyo yokuphuhlisa izakhono zabo. Eli linqanaba lokuxelisa, lokuba kutheni, nokwandisa ukufunyanwa kunye nokusekwa kwamaxabiso abalulekileyo kunye nemida. Abantwana bakhulisa ubuntu babo kunye nemilo yabo kweli nqanaba. Thanda kwaye usete imida, yithi "ewe" kwaye "hayi" ngothando olufanayo kunye negunya. Ke ngoko, eUbonisa imigaqo-siseko yobuKristu esemncinci.
Yiba ngumzekelo omhle kumntwana wakho. Uya kufunda ngokulula izimo zengqondo kunye nokuziphatha kweemodeli ezikufutshane, kunye neenkqubo ezibonwayo kwimeko yakho. Fundisa abantwana bakho, besebancinci thanda iimfundiso zikaThixo eziseBhayibhileni, la umthandazo wemihla ngemihla kunye neminye imikhwa esempilweni.
Yibani ngabaxelisa uThixo, ngokwabantwana abaziintanda;
Efese 5: 1
Ulufundisa njani ulutsha ngokwebhayibhile
Le nto ibizwa ngokuba "sisigaba esinzima" sabantwana. Umntu ekwakhekeni nakubuntu kubonakala bezama ukuzinyanzela. Lixesha lokuba gcina incoko evulekileyo kwaye uvelane namaxesha obunzima anokuvela. Imigaqo efundwayo inokubethwa ziimeko ezimbi, iimpembelelo ezimbi, kunye namava ayingozi, ke kufanelekile:
Gcina i ubudlelwane obuphilileyo.
Ukungavunywa kwe indlela yokuziphatha engalunganga ngaphandle koloyiko lokudibana.
Isikhokelo ngothando, intlonipho nobulumko.
Bakhuthaze ukuba bagcine i Ndiqinisekile ukuba ngubani unyana.
Ufundisa njani abancinci nabadala ngokwebhayibhile
Abazali abanabantwana kweli nqanaba banokuba ngababo abahlobo abakhulu, amahlakani kunye nabacebisi abalungileyo. la Amava obomi bomzali aya kuba luncedo olukhulu ukunceda kunye nokukhokela abantwana abadala kwizigqibo zabo zobuqu, ebomini babo nakusapho oluzayo.
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku liyakunceda uqonde indlela yokufundisa abantwana ngokwebhayibhile. Ukuba unomdla wokwazi kunjani ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.